ကျောင်းသူ ~ ~နွေဦးမိုး~
7:39 PM ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရ2comments
သူမအကြိုက်ဆုံးအရောင်ကို သူကမေးလာခဲ့တော့ အဖြူရောင်ဟုရဲရင့်စွာပဲဖြေခဲ့သည်။ ဒုတိယနဲ့တတိယအကြိုက်ဆုံးအရောင်ကိုပြောပါဦးဟု သူကထပ်မေးပြန်သည်။ အဲ့သည့်မေးခွန်းမှာတော့ သူမအနည်းငယ်တွေဝေခဲ့ရသည်။ အနီရောင်ဟာ သူမရဲ့ ဒုတိယအနှစ်သက်ဆုံးအရောင်ဖြစ်တတ်သလို တခါတရံကျပြန်တော့ အပြာရောင်လေးကလည်းသူမရဲ့နှစ်သက်မှုများကို ခိုးယူတတ်ပြန်သည်လေ။ တတိယအရောင်ကိုတော့ သူမ မဆိုင်းမတွပဲဖြေလိုက်နိုင်ပါတယ် အနက်ရောင်ပါလို့။
သူမရဲ့အဖြေကိုကြားတော့ ရယ်စရာ မပါခဲ့ပါဘဲလျက် သူကဟက်ဟက်ပက်ပက်ရယ်မောပြန်သည်။
“နင်ကလည်း ဘာအထာလဲဟ။ ငါ့စကားထဲမှာ ရယ်စရာပါတယ်လို့တော့ ငါမထင်ပါဘူး။ ဘာတွေများရယ်နေရပြန်တာတုန်း”
ခေါင်းမော့ရယ်နေသောသူက အရယ်ကိုရပ်ကာ သူမကို စေ့စေ့ကြည့်ကာပြောလာသည်။
“နင့်ကိုငါကြည့်နေတာ။ နင်ဟာပြတ်သားမှုနဲ့တွေဝေမှုတွေ ဒွန်တွဲနေတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပဲ။ ပြတ်သားလိုက်ရင်လည်း နင့်ထက် ၂ယောက်မရှိဘူး။ တွေဝေငြိတွယ်ပြန်ရင်လည်း ဆင်ကော်တောင်အရှုံးပေးရလောက်အောင်ခွာဖို့ခက်တယ်။ တကယ့်ကို ဂွတီးဂွကျ ကောင်မလေး။ အဲ့သည့်အခေါ်အဝေါ်နဲ့ နင်ခုဝတ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီနဲ့ စဉ်းစားမိလို့ရယ်တာဟေ့။ ရှင်းပြီလားဟ”
သူပြောမှ သူမလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လို့ငုံ့ကြည့်မိသည်။ ဟင်း…ဒါများရယ်စရာကျလို့ အာလာဒင်ဘောင်းဘီကြိုက်လို့ အချိန်ပိုင်းအလုပ် ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ပြီး ရတဲ့ပိုက်ဆံထဲက၀ယ်ထားရတာ။ လူများသူ့ရယ်စရာကျလို့…ဟု မကျေမနပ်တွေးလိုက်မိသည်။
အတွေးနှင့်အတူ နှုတ်ခမ်းစူသွားတဲ့ သူမကို စေ့စေ့ကြည့်ရင်းက သူကရှေ့တွင်ချထားသော လက်ဖက်ရည်ခွက်ကို တချိုက်တည်း မော့ချလိုက်သည်။
“ကဲ…နှုတ်ခမ်းစူထော်ထော်နဲ့ ဒေါ်စူပုတ်လေးရေ။ ငါတော့ အတန်းတက်ဖို့သွားတော့မယ်ဟေ့။ နင်လည်းစာကြည့်နေရင်း ငိုက်မနေနဲ့ဦး” ဟုဆိုကာ ခပ်သုတ်သုတ်ထွက်သွားခဲ့သည်။
ထွက်သွားတဲ့သူ့ကျောပြင်ကို အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ငေးကြည့်နေရင်းက ဖတ်လက်စ lecture slide ကိုဆက်ဖတ်နေမိသည်။ ခဏပါပဲ။ အတွေးတို့က စာကျက်စရာမလိုသောဘ၀ ဆီသို့သာ တ၀ဲလည်လည်။ မျက်စေ့ကိုိမှိတ် ခေါင်းကို ခပ်ပြင်းပြင်းခါရမ်းလိုက်ရင်း စာထဲသို့သာ စိတ်ကိုဇွတ်နှစ်လိုက်သည်။ First Semester စာမေးပွဲနီးပြီလေ။
Part Time လုပ်ရတာ ပင်ပန်းလှသည်။ စာမေးပွဲနီးပြီမို့ စာကြည့်ရချိန်ပိုများတော့ ပိုဆိုးသည်။ တချို့ကျောင်းသားတွေအတွက် မထောင်းသာလှပေမယ့် မတ်တပ်ကြာကြာရပ်တိုင်း နေမကောင်းဖြစ်တတ်တဲ့ သူမအတွက်တော့ Part Time လုပ်သော နေ့ရက်တိုင်းဟာ ပင်ပန်းလွန်းခဲ့ရတာ။
အဲယားကွန်းများစွာဖွင့်ထားတဲ့ Hyper Market ကြီးထဲမှာ တနေ့ကို အနည်းဆုံး ၆ နာရီလောက် မတ်တပ်ရပ်ရင်း လက်ကိုလည်း ဇယ်ဆတ်သလို မရပ်မနား လှုပ်ရှားရင်း ပစ္စည်းတွေကို scan ဖတ်ရသေးတာ။
တခါတရံ အသက်ကြီးသူတွေဈေးလာဝယ်လို့ ဆန်အိတ်အလေးကြီးတွေ နဲ့ဆပ်ပြာရည်ပုံးအကြီးကြီးတွေဝယ်လာရင်းနဲ့ scan ဖတ်ရန်လွယ်ကူစေဖို့ ကောင်တာပေါ်တင်ပေးဖို့မတတ်နိုင်တဲ့အခါနဲ့ Portable scanner လေးပျက်နေလို့မို့ ပစ္စည်းတွေဆီကို scanner လေးနဲ့သွားမဖတ်ပေးနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ပင်ပန်းတာမကြည့်ရက်တဲ့ သူမကပဲ အလေးခံပြီး ဆန်အိတ်အလေးကြီးတွေ ဆပ်ပြာပုံးအကြီးကြီးတွေကို ကိုယ်တိုင်သယ်ထုတ်ပြီး ကူညီခဲ့ရသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဈေးဝယ်လာသူများ ၄ ယောက်လောက်စုံသောနေ့တွင်တော့ ညဖက်ရောက်တိုင်း အပြင်းဖျားတော့သည်။
ထိုအချိန်များတွင်တော့ Decogen လိုမျိုး Biogesic လိုမျိုးအကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ နှင့် အားဆေးတွေကို ပဲလှော်စားသလို တလှေကြီးသောက်၍ သူမ၏ ညတာများတွင် မကြာခဏဆိုသလို ၀င်ရောက်စိုးမိုးလာသော အဖျားကို မောင်းထုတ်ခဲ့ရသည်။ နောက်နေ့မနက်တွင်တော့ ဆေးရှိန်ကြောင့် နှုံးလျအိပ်ချင်လွန်းနေသောသူမ အလုပ်သို့မသွားနိုင်ခဲ့။ ထို့ကြောင့် သူမ၏အလုပ်ချိန်များသည် ၁ရက်ခြား သို့မဟုတ် ၂ရက်ခြားများသာဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ဤကဲ့သို့ ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်နေရသည်များကို အိမ်ကတနည်းနည်းဖြင့်ပြန်သိသွားမှာစိုးသောကြောင့် နီးစပ်ရာအသိုင်းအ၀ိုင်းကိုလည်းပိတ်ပင်ထားရသေးသည်။ အိမ်ကကျောင်းလခတွေ အိမ်ခန်းငှားခတွေ အများကြီးပို့ပေးရတော့ တခါတရံတော့ ကိုယ့်အိမ်ငှားခလေး ကိုယ်ပေးချင်တာမို့ ကြိုးစားရှာချင်သေးသည်။ သို့ပေသည့် ထိုခဲ့သို့ အဖျားဝေဒနာကို မကြာခဏပေးလေသောအလုပ်တွင် အချိန်ကြာကြာတော့ ဒဏ်မခံနိုင်ခဲ့ပေ။ တပတ်ကို ပျမ်းမျှ ၃ရက်မှ ၄ရက်နှုန်း ဖြင့် ၃လအကြာလုပ်အပြီးမှာတော့ မျောက်ခေါင်းရုပ်ပေါက်လာခါ ယိုင်နဲ့နဲ့ဖြင့်လှုပ်လီလှုပ်လှဲ့သာကျန်တော့သည်။ ဒါပေမယ့် လူကြီးတွေပိုက်ဆံအကုန်သက်သာစေချင်သော ဆန္ဒဖြင့် ဇွဲကတော့ ဖြင့်မလျှော့ချင်သေး။
First Semester အပြီး ကျောင်းပိတ်ရက်များတွင်တော့ အ်ိမ်လခ ကိုယ့်ဖာသာရှာချင်တဲ့ သူမ ပြက္ခဒိန်လုပ်ငန်းမှာက အစ အချိန်ပိုင်းဝင်လုပ်ဖူးသည်။ second semester ပြန်တက်ချိန်တွင် ကံဇာတာတစခန်းလောက် တက်ချင်လာတော့ မနက်တိုင်းလို သူမအလုပ်လုပ်သောဆိုင်မှာ သစ်သီးလာဝယ်တတ်သည့် မန်နေဂျာတစ်ယောက်နှင့်မျက်မှန်းတန်းမိသည်။ သူကလည်း ကိုယ့်မြန်မာပြည်မှာအလုပ်တာဝန်ကျဖူးသည်ဆိုပဲ။ သည်တော့ “မင်္ဂလာပါ” ဆိုသောနှုတ်ဆက်စကားကို မပီကလာ ဆိုရင်း သူမရှိသောကောင်တာသို့သာ ရင်းနှီးမှုဖြင့်ရောက်လာတတ်သည်။ သူမအလုပ်မှဒဏ်မခံနိုင်၍ ထွက်ချင်နေသော ၂လခွဲလောက်အကြာမှာတော့ သူနဲ့အတော်အတန်ရင်းနှီးလာကာ လူရှင်းသောနေ့တစ်နေ့တွင်တော့ စကားစပ်မိရင်း သူမကလျှပ်စစ်အဓိကဖြင့် ကျောင်းပြီးကြောင်းသိသွားသော မန်နေဂျာကြီးက သူတို့ကုမ္ပဏီတွင် တပတ် ၅ရက်နှုန်းဖြင့် ကျောင်းမတက်ခင်အချိန်များမှာ အချိန်ပိုင်းအလုပ်ဝင်ဖို့ ကမ်းလှမ်းလာပါသည်။
၀ါသနာပါရာစာရေးစာဖတ် သီချင်းနားထောင်ရင်းတို့ဖြင့် အားလပ်ချိ်န်များကုန်လွန်တတ်ပြီး အလုပ်လုပ်ချိန်များအပြီးတွင် ဖျားတတ်သောသူမ သင်ခန်းစာများလည်း မလေ့လာမကျက်မှတ်သည်မှာ ကြာပြီ။ သည်တော့….တပတ် ၅ရက်လုံး အလုပ်လုပ်ရမည်မှာ ဖြစ်နိုင်ပါမည်လော ပြန်စဉ်းစားရသည်။
နောက်တော့ စနေတနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက်မှာစာကျက်လို့ရတာပဲဟု စိတ်ပိုင်းဖြတ်ကာ သူမအတွက် ဖျားနာမှုများစွာ ပွင့်လန်းစေခဲ့သော Casher အလုပ်ကို ၃လတိတိမှာ ကျောခိုင်းခဲ့သည်။
Mechanical & Electrical Help Desk ဘ၀နှင့် မနက် ၈နာရီခွဲမှ ၅နာရီခွဲထိ complain များစွာပါဝင်သော အီးမေးလ်များကိုစစ်ရင်း ဖြေရှင်းပေးဖို့ နည်းပညာရှင်များဆီသို့ ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်သွယ်ထားသော ဖုန်းထဲမှတဆင့်စာတိုလေးများပို့ရင်း သူမရဲ့တစ်နေ့တာများဟာ ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အခန်းကျဉ်းလေးထဲက အီးမေးလ်အသစ်ဝင်လာတိုင်း တတုံတုံမြည်တတ်တဲ့ ကွန်ပျူလေးရှေ့မှာ ကုန်လွန်ခဲ့ရသည်။
မနက်တိုင်း ၀င်ခွင့်ကတ်ပြားနှင့် ၀င်ပေါက်ဟူသမျှကို scan ဖတ်ဝင်ရသော။ မြို့လယ်ခေါင်တွင်တည်ရှိသော။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားကာ အထပ်ပေါင်းများစွာရှိသော ဆင်တူတာဝါ ၂ခုအားအလယ်တွင် ပေါင်းကူးတံတားဖြင့် ဆက်သွယ်ထားသော။ မျက်နှာဖြူများနှင့် လစာမြင့် ရေပေါ်ဆီလူတန်းစားအသွင်ရှိဝန်ထမ်းများလုပ်ကိုင်သော အဆောက်အဦးကြီးသို့ မနက်၈နာရီထိုးတိုင်းအချိန်မှီရောက်ရှိရန် သူမကွန်းခိုနားရာ တိုက်ခန်းလေးမှ မနက်၆နာရီထိုးတိုင်း ထွက်ခွာသွားခဲ့ရသည်။
ရုံးခန်းထဲမှာ များသောအားဖြင့် သူမ တစ်ယောက်ထဲရှိမှာမို့ကျောင်းစာတွေလည်း လုပ်နိုင်မှာပါဟု အလုပ်မ၀င်ခင်က အလုပ်အခြေအနေကို မန်နေဂျာကြီးကပြောထားခဲ့တာကြောင့် စာဖတ်နိုင်မည်ပဲထင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ဘ၀အခြေအနေကတော့ မိနစ်တိုင်းနီးပါး တတုံတုံတက်လာတတ်သည့် complain king , complain queen များဟု သူမနာမည်ပေးထားသည့် ကျွန်းသူ ကျွန်းသားအပေါင်းတို့၏ အဲယားကွန်း အအေးလျော့လို့မို့ ။ အေးလွန်းလို့မို့။ ဆူညံသံတွေထွက်နေလို့မို့။ ဘယ်နေရာမှာ power trip ဖြစ်တော့မယ်ထင်လို့မို့။ ဘယ် socket outlet ပုံကို မကြိုက်လို့မို့။ မီးချောင်းအလင်းက ဘယ်လိုမို့။ ဆိုသည့် မရိုးနိုင်သော complain များစွာကို ရေးထားတဲ့ အီးမေးလ်များကိုဖတ်လို့ ဒါကတော့ Mechanical Technician ကိုလွှတ်ရမယ်။ ဒါကတော့ Electrical Technician စသည်ဖြင့်ခွဲခြားရင်း သက်ဆိုင်ရာ လူဆီသို့မက်ဆေ့ဂ်ျတိုလေးတွေရိုက်ပို့။ သူတို့ဆီမှ ဘယ်အချိန်သွားပါပြီဆိုတာ reply ပြန်လာသည်နှင့် complain queen/king များဆီသို့ အကြောင်းပြန်နှင့် လက်၂ဖက်ဆိုတာ အနားပေးဖို့သိပ်အချိန်မရှိလှ။ သို့ပေသည့် ဘာစိတ်ဖိစီးမှုမှမရှိဘဲ ဘာနည်းပညာမှသုံးစရာမလိုပဲ လူလည်း ပင်ပန်းမှုမရှိဘဲ။ အိမ်လခ။ ရထားခ များအတွက် ပူစရာမလိုအောင်လုံလောက်သည်ထက် အနည်းငယ်ပိုနေသေးသော လစဉ်ဝင်ငွေသည် သူမအား ဤအလုပ်မှာ အချိန်ပိုင်းဆက်လုပ်စေဖို့ ဆွဲထားခဲ့သည်။
ညနေ ၅နာရီခွဲရုံးဆင်းလျှင်တော့ ကျောင်းသို့အချိန်မီရောက်ရန် အူယားဖားယား ပြေးရတော့သည်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘယ်သောအခါမှ သင်ခန်းစာအစကို သူမ မမီခဲ့ပေ။ အလုပ်လုပ်သော မြို့လယ်ခေါင်မှ ကျောင်းရှိသော ရထားလမ်းဂိတ်ဆုံးနီးပါးသို့ ရထားဂိတ်ပေါင်းများစွာစီးရမည်မှာ အနည်းဆုံး၄၅မိနစ်တော့ ရှိမည်။ ဒါတောင်ရထားဂိတ်မှကျောင်းသို့ရောက်ရန် ကားတစ်ဆင့်စီးရဦးမည့် အချိန်နှင့် စာသင်ဆောင်ဆီသို့ရောက်အောင်သွားရမည့် အချိန်မပါသေး။
သည်တော့ အလုပ်လုပ်သော ကုမ္ပဏီနှင့်အနီးဆုံး ရထားဂိတ်မှသည် စာသင်ရာကျောင်းတော်နှင့်အနီးဆုံးရထားဂိတ်သို့ ရထားတစ်ဆင့်စီး ထိုမှတဆင့် စာသင်ရာ Lecture Theatre နှင့်အနီးဆုံးရောက်သည်ထိ တက္ကစီကိုသာ ငှားစီးရလေ့ရှိသည်။ ဒါတောင် သူမရောက်သွားချိန်များမှာ ဆရာစာသင်နေသည်မှာ အရှိန်ရနေပြီဖြစ်သည်။ ၁နာရီစာသင်ပြီးလို့ အားလပ်ချိန် ၁၅မိနစ်ပေးချိန်များတွင်တော့ ကော်ဖီစက်ရှိရာသို့အပြေးသွားလို့ ကော်ဖီတခွက် ၀ယ်သောက်ရတတ်သည်။ တကယ်တော့ ကော်ဖီ။ လက်ဖက်ရည်ဆိုသည်မှာ သူမ၏ ရန်သူ။ ၁၀ခါသောက်တိုင်း ၇ခါလောက်က ၀မ်းထဲသို့ရောက်သွားသည်နှင့် လည်ချောင်းတွင်ပျို့လာတတ်ကာ မထိန်းသိမ်းနိုင်ပါက ဝေါ့ကနဲ ထိုးအန်တတ်တာကြောင့် အန်ရတဲ့ ဝေဒနာဆိုးကို စိုးရွံ့မိသည့် သူမ ဘယ်တော့မှ မသောက်တတ်ခဲ့။ သို့ပေမယ့် ကော်ဖီမှ မသောက်လျှင်လည်း တနေကုန် ပင်ပန်းထားသော သူမမျက်ဝန်းများ ပွင့်နိုင်တော့မည် မထင်။ ပြီးတော့ စက်မှ အကြွေစေ့ပေးဝယ်ကာ သောက်ရသည့် ကော်ဖီက ဆိုင်ဖျော်လို မပြင်းတတ်တာကြောင့် သူမဒဏ်ခံနိုင်ပါသည်လေ။ ကျောင်းကပြန်ရောက်လျှင်တော့ ဆရာရှင်းပြခဲ့သည့် စာများကိုလည်း ပြန်လည်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းမပြုနိုင်တော့။ ငိုက်မြည်းနေသော မျက်လုံးများက အိပ်ရာဆီသို့သာ မျက်စောင်းထိုးနေတတ်ခဲ့သည်။
ကိုယ်ယူသောဘာသာရပ်အလိုက်သာကျောင်းတက်ရတာမို့ တပတ်မှာ ၃ရက်သာတက်ရသောကြောင့်သာတော်တော့သည်။ သို့မဟုတ်ပါက နောက်ကျမှ ရောက်လာတတ်သော။ စာသင်သော ဆရာကို ပင်ပန်းသော မျက်လုံးများဖြင့်ရီဝေေ၀ကြည့်တတ်သော။ တခါတရံ လက်ဖက်ရည်ခွက်ကြီးရှေ့ချလို့ ဟန်မဆောင်နိုင်လောက်အောင်ပင် စားပွဲခုံနှင့် ထိမိမတတ် တဒိုင်းဒိုင်း အိပ်ငိုက်တတ်သော သူမကို နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ ကျောင်းသားတိုင်း မှတ်မိပေရော့မည်။
စနေတနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက်လေးတွေမှာတော့ ကျောင်းတွင် စာစုလုပ်တတ်သော အတန်းဖော် မြန်မာများထံမှ လွတ်သွားသောစာများကိုပြန်မေးရသည်။ အိပ်ငိုက်လို့ နားမလည်လိုက်သော ပုစ္ဆာများကို ပြန်ရှင်းပေးစေရသည်။ First semester အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်စဉ်ကတော့ Formula Derivation တွေများလှတာကြောင့် ကျောင်းမပြတ်တက်ခဲ့သော စာတော်သော မောင်ငယ်တစ်ယောက်က သူငယ်ချင်းများကို စုရှင်းလေ့ရှိသည်ကို သွားရောက်နားထောင်ရင်း မှတ်ဥာဏ်ပြန်ခေါ်ခဲ့ရသည်။ တပြည်ရပ်ခြားမှာရောက်နေခဲ့သော မြန်မာများ ဤကဲ့သို့စည်းရုံးကူညီမှုကို သူမ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် မေ့မရပါ။ စာနားမလည်မှာကိုသာ သူမစိတ်ပူသည်။ နားလည်ပြီးလျှင်တော့ တနေ့စာတနေ့ ချက်ခြင်းမှန်မှန်လုပ်သည့်ထဲမပါခဲ့။ သည်တော့ နားလည်အောင် စာရှင်းပြသည်ကို သွားနားထောင်သည်။ ပြီးလျှင်တော့ ပစ်ထားပြီး စာမေးပွဲနီးမှ ကုန်းလုပ်တတ်သည်မှာ သူမအကျင့်။ ပထမနှစ်ဝက်တုန်းကတော့ သိပ်မဆိုးခဲ့ပါ။ သူငယ်ချင်းအုပ်စုကြီးနှင့်စာစုလုပ်ဖြစ်ကြကာ အနည်းဆုံးတော့ ၂ပတ်တခါလောက် သင်ပြီးသားစာများကို စုရှင်း စုလုပ်တတ်ကြတော့ စာကြွေးသိပ်မရှိခဲ့။ နောက်တော့ အလုပ်ချိန်များနှင့်မဆုံဖြစ်ကြတော့သော သူမသည် သူငယ်ချင်းများအလယ်တွင် တကိုယ်တည်းဖြစ်လာခဲ့သည်ပေါ့။ ကျောင်းမတက်ရသော နေ့များတွင် အလုပ်ကပြန်လာသည်နှင့် ရေချိုးထမင်းစားခါ စာရေးစာဖတ်ခြင်းများနှင့်သာ သူမပျော်ဝင်ချင်ခဲ့သည်။ သို့ပေမယ့် စက်ရုပ်ဆန်လူသားဘ၀နှင့် တနေကုန်ကျင်လည်ခဲ့ရသော ကိုယ့်ဦးနှောက်လေးက စာပေအလှအပနုရွမှုလေးတွေ ထွက်မလာတတ်ခဲ့တော့။
အလုပ်သို့သွားသည့် လမ်းမှာ အမြဲတမ်း မြေအောက်shopping centre လေးတစ်ခုကို ဖြတ်သွားရသည်။ အိပ်ငိုက်နေသော မျက်လုံးများနှင့် ခပ်သုတ်သုတ်သွားရသည့်သူမကတော့ လမ်းလျှောက်နေရင်းနှင့်ပင် လိုဏ်ခေါင်းတလျှောက်ဖွင့်ထားသော ခပ်အုပ်အုပ်လေးပျံ့လွင့်လာသည့် တေးသံသာများကို ခံစားနားဆင်တတ်သေးသည်။ ဂီတနှင့်စာပေဟာ သူမရဲ့ အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေပါပဲ။ သို့ပေမယ့် အိမ်ပြန်ချိန်များမှာတော့ ဂီတကို မခံစားနိုင်ခဲ့ဘဲ ကျောင်းချိန်မှီဖို့ ပြေးလွှားရပြန်သည်ပေါ့။
စာမေးပွဲနီးလာတော့ စနေတနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက်များတွင် စာလုပ်ဖို့အချိန်ပေးကာ ကျောင်းသို့သွားလေ့ရှိသည်။ အိမ်မှာနေလျှင်တော့ မကြာခဏစာရေးချင်တတ်သော လက်များနှင့်… မကြာခဏ အိပ်ယာပေါ်ပစ်လှဲအိပ်တတ်သော မျက်လုံးများကို တားမရနိုင်ခဲ့။
နားမလည်သောစာများကို ဆိတ်ငြိမ်စွာဖြင့် ဖတ်ရသည့်အချိန်များ။ Formula Derivation များနှင့်လုံးပမ်းရသော အချိန်များနှင့် စာကြည့်တိုက်မှ စာအုပ်များကိုးကားရန်လိုသောအချိန်များတွင်တော့ တဦးးချင်းသီးသန့်ထိုင်နိုင်သော ။ နံရံလေးနှစ်ဖက်နှင့် သူမ၏ အဆီထစ်နေသော ၀မ်းဗိုက်လေးကိုသာမက ခန္ဓာကိုယ် ခပ်သေးသေးလေးကိုပါ လုံခြုံအောင် ကွယ်ပေးနိုင်သော ထောင့်ကောင်းကောင်း ရှုခင်းကောင်းကောင်းနေရာများကို သူမရွေးချယ်လေ့ရှိ၏။ ထိုအခါ စာလေးလုပ်လိုက် မျက်စိညောင်းလျှင်ဖြင့် မှန်ပြတင်းမှ မြင်တွေ့ရသည့် ဟိုခပ်ဝေးဝေးမှိုင်းပျပျဆီမှ နန်ယမ်းတောင်ကုန်းလေးကို မျှော်ငေးလိုက်ဖြင့် မိဘများကိုလွမ်းရင်း စိတ်အပန်းဖြေခဲ့သည်။
စာများကို နားလည်ပြီး တခါတရံမှတ်သားရမည့်စာများပါလာလျှင်တော့ နားလည်ရုံသာမက ဦးနှောက်ထဲစွဲသွားစေရန် သူမသည် အသံထွက်၍သာ ရွတ်ဖတ်လေ့ရှိသည်။ ထိုအခါ ဆိတ်ငြိမ်နေသော စာကြည့်တိုက်ထဲတွင် သူမ၏ အသံကြောင့်တော့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှသူများကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေလို။ ထို့ကြောင့် ဆေးကျောင်းသားများ သုတေသနပြုလုပ်ရာ သင်ခန်းစာများသင်ကြားလေ့ရှိသည့် biomedical school ဖက်က ခုံတန်းရှည်များပေါ်သို့ သူမခြေချဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤနေရာလေးတွင် သူမ နှင့် သူစတင်၍ သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ဆိတ်ငြိမ်စွာ စာကိုတိတ်တိတ်လေးဖတ်ချင်လို့ ဆေးကျောင်းဖက်သို့ခြေချခဲ့သည့် Triple E (Electircal & Electronic Engineering) မှကျောင်းသားတစ်ဦ်းနှင့် စာတွေကို ငယ်ငယ်က စာအံကျက်သလို တတွတ်တွတ်နှင့် အော်ကျက်ကာ ဆိုချင်ခဲ့သော (Computer Engineering) မှကျောင်းသူတစ်ဦးတို့ မတူညီသော ကျောင်းပရ၀ုဏ်ထဲတွင် တွေ့ဆုံမိကြရာဝယ်….
သူကတော့ သူမကို ဒီလိုအကဲခတ်ခဲ့သည်။
တစာစာနှင့် အာဗြဲကြီးစာအော်ဆိုနေသော ပုတက်တက် အသားညိုညိုကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို သူမျက်စိစပါးမွေးစူးခဲ့သည်။ အာဗြဲနှင့် စာအော်ဆိုကာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဒုက္ခပေးရုံနှင့်မ၀သေး။ တခါတရံ သူမဆီကို မကြာခဏ ၀င်လာတတ်သည့် ဖုန်းတွေကိုလည်းပြောလိုက်သေးသည်။ တော်တော်အမြင်ကတ်ဖို့ ကောင်းအောင်အာရုံနောက်သည့်ကောင်မလေး။ အနားမှာ သူပဲရှိလို့သာပေါ့။ တခြားနိုင်ငံခြားသားတွေသာရှိလျှင် စာအော်ဖတ်သည့်ကောင်မလေးအဖြစ် ကွက်ကြည့်ကြည့်တာ ခံရဦးမည်။
သူမကတော့ သူ့ကို ဒီလိုအမြင်ကတ်ခဲ့သည်။
ငါ့ဖာသာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်လေး စာအော်ဆိုချင်လို့ ဘယ်သူမှမရှိတဲ့ ဒီနေရာကို လာဦးထားပါတယ်။ ဒီတစ်ယောက်ကရောက်နေပြန်ပြီ။ ဒီကောင်လေးကတော့ အနှောင့်အယှက်ပဲ။ အမြင်ကို ကတ်တယ်တော်။ သူမကျေနပ်လို့ပြောင်းပြေးသွားလည်း အေးတာပဲ။ ငါတစ်ယောက်ထဲစာအော်လို့ရတယ်။ လို့တွေးကာ ပိုတောင်အော်ပစ်လိုက်သည်။
သည်လိုနှင့် စနေတနင်္ဂနွေ ၂ပတ်လောက် တယောက်ကို ခုံကြီးတခုံစီနေရာယူပြီး အနိုင်မခံအရှုံးမပေး ဘယ်သူမှမဖယ်ခွာကြပဲ စာအတူလုပ်လာရင်းနှင့် သူမ၏ စာအော်သံကို ကျင့်သားရကာ မ်ိတ်ဆွေဖွဲ့ရင်းနှင့် သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ခဲ့သည်။
စာလုပ်ရင်းနားသောအချိန်တွင် သူကသီချင်းတွေဖွင့်သည်။ သူ့ချစ်သူကောင်မလေးပို့ထားသော အီးမေးလ်များနှင့် ဓာတ်ပုံများကိုဖွင့်ကာ အလွမ်းဖြေသည်။ သူမက အင်တာနက်ဖွင့်ကာစာတွေ ကွန်မန့်တွေလျှောက်ရေးတော့သည်။ တခါတလေတော့ ရေးထားတတ်သည့် စာတို ကဗျာတိုလေးများကို သူ့ကိုပေးဖတ်သည်။ သူကတော့ မခံစားတတ်။ မှတ်ချက်မပေးတာများသည်။ တခါတရံပေးတတ်သည့်မှတ်ချက်လေးကတော့ ဘာတွေရေးထားမှန်းမသိဘူးဟူ၍….
ရံဖန်ရံခါံပိတ်ရက်လေးစာလုပ်နေချိန်တွင် အရင်လုပ်ခဲ့သော ပြက္ခဒိန်လုပ်ငန်းက လူလိုလို့ လာကူပေးပါဆိုလျှင် နောက်ဆုံး semester အတွက် အချိန်ပြည့်လုပ်ရသောရုံးလုပ်ငန်းမှ ခဏထွက်ပြီး ကိုယ်လုပ်ချင်ချိ်န်မှ သွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်သော အချိန်ပိုင်းအလုပ်များကို ပြန်လုပ်မည် စိတ်ကူးတာကြောင့် မိတ်ပျက်၍မဖြစ်။ ထိုအခါ စာလုပ်နေရင်းနှင့် အလုပ်သို့ထပြေးရ၏။ ထိုအခါမျိုးတွင်တော့ သူက “နင့်မလည်း စာမေးပွဲနီးတာတောင် အလုပ်ကိုပြေးရသေးတယ် ဒုက္ခ“ ဟုပြောသည်။ သူမကလည်း သူ့ရှေ့တွင် ၀မ်းနည်းသယောင်မျက်နှာထားလေးထားလိုက်ကာ “တချို့တချို့အတွက်လွယ်ပေမယ့် ကိုယ်ဟာ ရုန်းကန်လာခဲ့ဖူးတယ်“ ဟု သီချင်းလေးတပိုင်းတစဆိုပြလိုက်လျှင်တော့ “နင်က အိမ်ကယူလည်းရလျက်နဲ့ မယူတာကိုး လူဆိုးမရဲ့“ ဟုပြောဆိုရင်းကျန်ရစ်တတ်၏။
သို့နှင့် နောက်ဆုံး semester တွင် စာတမ်းပြုစုရန် နှင့် Dissertation ကြီးအောင်မြင်စေရန်အတွက် သူမအတွက် အချိန်ပိုရမည်ဖြစ်သော အချိန်ပိုင်းအလုပ်ခွင်ထဲသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရပြန်သည်။ သည်တော့လည်း အဖျားနှင့် ပြန်မိတ်ဆွေဖွဲ့ခဲ့ရပြန်၏။
အချိန်ပိုင်းအလုပ်ဝင်တော့ ၀င်ငွေက ၃ပုံ ၂ပုံနီးပါးလျော့ကျသွားပြန်သည်။ သည်တော့ အချိန်ပြည့်အလုပ်ပဲ ပြန်လုပ်ချင်တော့တာပါပဲ။ စာမေးပွဲနီးမှ စာစုပုံရှင်းတတ်လေ့ရှိတဲ့ သူမက စာကိုတော့ နောက်မှ စုပုံရှင်းဖို့ စိတ်ကူးထားသည်။ ဒါပေမယ့် Dissertation လုပ်ရင်းနဲ့ အဆင့်အလိုက်ရလဒ်တွေ ဆရာကို ပြနိုင်ဖို့ နှင့် ရလာဒ်တွေရရှိပုံအဆင့်ဆင့်ကို စာတမ်းပြုစုဖို့ရန်အတွက်ကတော့ အချိန်ပြည့်အလုပ်ပြန်လုပ်ပါက မဖြစ်နိုင်ခဲ့။ သို့နှင့် ငွေကြေးနှင့် အချိန်ကို လဲလှယ်ခဲ့ရသည်။
ဤသို့နှင့် လိုအပ်သောငွေကြေးနှင့်မရှိမဖြစ်သော အချိန်တို့ကို ယှဉ်ကြည့်နေဖို့အချိန်များမရခဲ့ဘဲ။ ပရော့ဂျက်များ။ ကျောင်းသင်ခန်းစာများ Dissertation လုပ်ရန်အချိန်များကို လောက်ငှအောင် ခွဲဝေသုံးစွဲရင်း အသားကျလာချိန်တွင်တော့ စိတ်ဖိစီးမှု များသလောက် ၀င်ငွေလည်း လုံလောက်စွာကောင်းမွန်သော အလုပ်တစ်ခုက ကမ်းလင့်လို့ကြိုလာပြန်သည်။
ထိုအချိန်ကတော့ Dissertation က ၇၀%ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြီးခဲ့ပြီး ဆက်လုပ်ဖို့ရာ တစ်နေခဲ့သည့်အချိန် ထို့ကြောင့် စာတမ်းကြီးတစ်ခုစာပြုစုဖို့ အစပျိုးထားခဲ့ပြီး ..ပြန်ဝင်မည်လော။ ဆက်မလုပ်နိုင်ခဲ့လျှင် သူမရဲ့ Dissertation ကြီးမပြီးခဲ့လျှင် ဒီဂရီမရတော့မှာမို့ စာတမ်းအခြေအနေကလည်း ဘယ်လောက်ကြာမည်မသိ။ Result ထွက်ဖို့ရာလည်း တစ်နေခဲ့သည့်အချိန်မို့စိတ်တွေ ထွေပြားကာ အလုပ်ကိုလည်း လုပ်မည်မလုပ်မည်အကြောင်းမပြန်ခဲ့။
အလုပ်မှဖုန်းဆက်ခေါ်ပြီး စာမေးပွဲနီးပါက ခွင့်ယူခွင့်ပေးမည်ဖြစ်တာကြောင့်လက်ခံစေလိုကြောင်း ပြောလာတဲ့အခါတွင်တော့ သူမအချိန်ပြည့်အလုပ်တစ်ခုတော့ ပြန်ရောက်ခဲ့ရသည်။ ဒီတစ်ကြိမ်တွင်တော့ ပထမ အချိန်ပြည့်အလုပ်လို စိတ်ဖိစီးမှုမနည်းခဲ့။ အချိန်တိုင်းဟာ စိတ်ဖိစီးမှုများအောက်တွင် ကုန်ဆုံးခဲ့ရသည်။
နေထိုင်ခွင့် ကဒ်ကိုလည်း ကျောင်းသားကဒ်မှ ၀န်ထမ်းကဒ်သို့ကူးပြောင်းပြီးပြီမို့ အားတင်းခါပင် ၂ခုလုံးနိုင်အောင်လုပ်ရတော့သည်။ အထက်တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုချိန်မှာတောင် ည၁၂နာရီထက် ပိုညဉ့်နက်အောင် စာမကျက်တဲ့သူမရဲ့ ညအိပ်ချိန်များသည် စာတမ်းရေးရန်အတွက် ရလဒ်ကြီးပြီးအောင်လုပ်ဖို့ရန်အတွက် အမြဲပဲ ၂နာရီကျော်ခဲ့ရသည်။ မနက်ရောက်လျှင် အိပ်ရာမှထလို့ စိတ်ဖိစီးမှုများစွာပြည့်နေသော အလုပ်သို့သွားရပြန်၏။
တခါတလေ ကျောင်းအီးမေးလ်ကို အလုပ်ထဲတွင် ၀င်စစ်ခိုက် ပရော်ဖက်ဆာက ကိုယ်ရေးထားတဲ့ စာတမ်းကို မကြိုက်လို့ မှတ်ချက်တွေပေးကာပြင်ခိုင်းချိန်နှင့် သူမ၏့ အလုပ်မှလည်း စိတ်ဖိစီးများ မမျှအောင် တွေ့ကြုံနေရချိန်များနှင့် တိုက်ဆိုင်လျှင်တော့ မခံစားနိုင်တဲ့စိတ်နဲ့ ဘယ်သူ့မှ ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ဘဲ ချုံးပွဲချကာ အားပါးတရ ငိုမိတော့သည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် နိုင်ငံခြားသားများက ဘာများဖြစ်သလဲဟ။ ဆိုကာမေးကြမြန်းကြနှစ်သိမ့်ကြလုပ်ကြ၏။ ထိုအခါမျိုးတွင်တော့ သူမက ငိုရင်းလက်စနဲ့ ပရော်ဖက်ဆာ ပို့ထားတဲ့ အီးမေးလ်ကို လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်သောအခါတွင်တော့ သူတို့သဘောပေါက်သွားတော့သည်။ ထိုအခါ ခွင့်ယူမလားဘာလုပ်မလည်း ဟုမေးလာတော့ သူမက ရှိုက်လက်စမရပ်တန့်နိုင်ဘဲရှိုက်ကြီးတငင်ဖြင့် ငါက ည၂နာရီထိ ရေးထားတာကို ပရော်ဖက်ဆာကြီးက မကြိုက်ဘူးတဲ့။ ဟု လက်ညှိုးတထိုးထိုးဖြင့် ရင်ဖွင့်မိတော့သည်။
ထိုအချိန်မှ စ၍ စိတ်ထဲရှိတိုင်း မအောင့်အည်းတတ်ဘဲ တုံ့ပြန်တတ်သော။ စိတ်ကို ထိန်းချု့ပ်နိုင်မှုနည်းသော။ ခံစားလွယ်သော သူမ၏ စိတ်ရင်း စရိုက်ကို လူတိုင်းသိမြင်သွားခဲ့သည်။ ( စီနီယာကတော့ သူမအား “ကလေးမဟုတ်တော့ဘူး။ စိတ်ကို တင်းထား တင်းထား“ ဟု အမြဲအားပေးလေ့ကျင့်နေခဲ့သည်မှာ ယခုထက်တိုင် ဒါပေမယ့် ယခုထိတိုင်လည်း သူမစိတ်များကို မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့သေးပါ)။ သို့နှင့် မအောင့်အီးနိုင်သောအချိန်များတွင် ငိုကြွေးရင်း။ ငိုက်တလှည့် စိတ်ညစ်တလှည့် ကြားမှ ကျောင်းစာများကိုလုပ်လိုက်ရင်းနှင့်…သူမ ကျောင်းပြီးသွားခဲ့သည်။
ပိုက်ဆံကို သူတပါးတိုင်းပြည်မှာ ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရတော့မှ စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့် ရင်းကာရခဲ့သော ၀င်ငွေများအဖြစ် သူမတန်ဖိုးထားတတ်ခဲ့လာသည်။
တခါတရံ ဖုန်းဆက်မိချိန်များတွင် သူငယ်ချင်းကသူ့အိမ်ထောင်ရေး ရှေ့ရေးများကိုပြောပြတတ်သည်။ နင်လည်း ယောက်ျားယူတော့ဟု တိုက်တွန်းတတ်သေးသည်။ ထိုကဲ့သို့ တိုက်တွန်းတိုင်း “သူငယ်ချင်းရေ…. ကိုယ်က စာတွေကို သင်ယူခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသူလေးပဲဖြစ်ခဲ့ဖူးတာလေကွယ်။ အချစ်အကြောင်းလေး ကြေညက်အောင် အချစ်ရဲ့ကျောင်းသူလေး လုပ်ဖို့တော့ လိုလိမ့်ဦးမယ်။ ဒါမှလည်း နင်ပြောတဲ့ အိမ်ထောင်ပြုရေး ခိုင်မြဲအောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှာပေါ့။“ ဟု ရယ်သွမ်းသွေးကာ ပြန်လည်စနောက်ခဲ့သည်။
တကယ့်လက်တွေ့မှာ ပညာသင်ကြားရသော့ ကျောင်းသူလေးဘ၀နှင့် စာတွေကို ကျေညက်အောင် ကြိုးစားလေ့လာသင်ယူလို့..ကံ၊ဥာဏ်၊၀ီရိယ ထပ်ပေါင်းကာ ဘ၀အသက်မွေးမှုအတွက် မြင့်မားသောခုံတစ်ခုံရရှိအောင် ကြိုးစားရမည်မှာ ဖြစ်နိုင်ပေသေးသည်။ အချစ်ရဲ့ကျောင်းသူအဖြစ် မြတ်နိုးတွယ်တာချစ်ခင်မှု၊ သစ္စာရှိမှု နှင့် မေတ္တာမပျက်ယွင်းမှုတို့ကို ကိုယ့်ခင်ပွန်းဆီက ဘ၀တစ်သက်တာလုံး မပျက်မယွင်းအောင် ထိန်းသိမ်းရရှိစေဖို့ ကြိုးစားရမည်မှာ တကယ်ရော လွယ်ပါမည်လော၊ ဖြစ်နိုင်ပါမည်လောဟု။ သူတစ်ပါးစိတ်ကို ထိန်းချုပ်ဆွဲငင်ဖို့ရာ ယုံကြည်မှုနည်းလွန်းသော သူမတွေးနေမိပါသည်။
You make me miss our NTU student life, Kyi Phyu Paing. Like the last paragraph. The way you give the information is good. Cheers.
Witch83 >>> တို့များဟာ အချစ်ရဲ့ကျောင်းသူလေးအဖြစ်တော့ ယုံကြည်မှုတွေ မရဲနိုင်သေးပေ ပေါ့လေ။ဟားဟား ဘဝတူတွေ :)